Aqoonkaab 10 faaido oo socodku u leeyahay caafimaadka | Aqoonkaab
10 faaido oo socodku u leeyahay caafimaadka
Aug 06, 2017Caafimaadka
Socodka waxa loo arkaa inuu yahay kan ugu fiican ee ka qayb qaata horumarka jidhkaaga ,socodka 30 daqiiqo maalin kasta waxa uu saameyn togan ku leeyahay caafimaadka masakaxda iyo jidhka ,hadaba waa kuwan tobanka Faaido ee ugu waawayn ee laga kasbado socodka
1. jidhka oo noqda mid muddo dheer caafimaad qaba . cilmi baadhyo kala duwan ayaa sugey in dadka joogteeya jimicsiga socodka ay noqdaan qaar muddo dheer u eeg dhalinyaro ,sidoo kalena ay yihiin qaar aanu haleelin cudurada Kansarka iyo Faaliga.
2. Miisaanka dheeraadka ah oo Kaa luma . socodka ayaa lagu tiriyaa inuu Ka mid yahay jimicsiyada qofka ka caawiya inuu lumiyo Miisaanka dheeraadka ku ah jidhkiiisa ,hadaba hadaad ka cabanayso miisaan saaida waxa kula gudboon inaad socodka badsato .
3. wuxu yareeya Halista Kansarka : Xaqiiq waxay sugeen cilmi baadhyo kala duwani In socodka sida joogtada loo sameeyo uu yareeyo halista imaanshaha qaar ka mid ah cudurada Kansarka sida Kansarka naasaha,iyo kansarka mindhicirada.
4. wuxu yareeya halista haleelida Macaanka: socodka la sameeyo maalinti 30 daqiiqo wuxu yareeya fursada oo kugu haleeli laha cudurka macaanka,Maadaama uu cudurka macaanku yahay mid inta nolosha kaaga kula qaybsanaya,aduunkana ku fidaya naftaada ku ilaali socodka maalin laha ah.
5. wuxu yareeya halista Faaliga iyo xanuunada wadnaha: socodku wuxu ka shaqeysiiyaa habdhiska dhiig wareega jidhka sidaasi daraadeed wuxu yareeyaa fursada uu kugu haleeli lahaa xanuunka Faaliga iyo xanuunada kale ee wadnaha ,sidoo kale wuxu yareeya xadiga cholesterol ee jidhka .
6.Xoojinta Xasuusta iyo hagaajinta shaqooyinka maskaxda:sida ay cilmi baadhsiyo kala duwani Xaqiijiyeen socodka maalintii 45 Daqiiqo wuxu si weyn u xoojiyaa Xasuusta waxaanu hagaajiyaa awoodaha maskaxda.
7. wuxu yareeyaa Dhiigkarka:Socodka oo la raaciyo Jimicsiyo kale wuxu caawiyaa in lasoo daayo maadada endorphin taas oo muhiim uh jidhka kana shaqeysa hoos u dhigida dhiigkarka isla markaana yareysa dareenka xambaarsan werwerka .
8. wuxu kaalmeeya Caafimaadka Awooda Jinsiyeed ee ninka:socodku wuxu si u diidaa inuu daciifo awooda jinsiyeed ee ninku ,islamarkaana ilaaliyaa caafimaadka jinsiyeed ee ninka .
9. ku Raaxeysiga Jimicsiga socodka:socodku maaha jimicsi dhib badan sida jimicsiyada kale lkn waa Jimicsi fudud isla markaana aad ku raaxeysan kartid ,awoodina kartid xilli kasta iyo meel kasta .
10. Ka hortaga miisaanka saaidka ah :sida uu u yareeyo socodku miisaanka ,hadana wuxu ka hortagaa inuu jidhkaaga fuulo miisaan saaid ah.
Waxa qorey :maxamed maxamud sardheeye
Previous PostAaladda Instagram waxa uu u daranyahay caafimaadka maskaxda dhallinta Next PostSababaha Keena In Xilliga Ramadaanka Dadka Qaar Ku Naxaan Iyo Sida Ugu Fiican Ee Looga Feejignaan Karo
3 thoughts on “10 faaido oo socodku u leeyahay caafimaadka”
Mohmed Ali Shakir June 22, 2017 at 4:59 pm
Khadar March 30, 2018 at 2:02 pm
Aad iyo aad ayaad ugu mahadsan tihiin samayeynta aad samayseen websitekan. Maxaa yeelay maba jiro website kaloo sidan oo kale ah. Markaa jazaakaAllah walaalayaal.
Anonymous April 28, 2019 at 12:53 pm
Dhididka mxa keena